Hagaha Socdaalka Kuala Lumpur Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Kuala Lumpur, loo yaqaan KL by dadka deegaanka, waa caasimada federaalka ee Malaysia iyo magaalada ugu weyn ee 6.5 milyan (dadka ku habboon magaalada ee 1.8 milyan). Kuala Lumpur waa dheri dhaqan dhalaalaya oo leh qaar ka mid ah hudheelada adduunka ugu raqiisan 5-xiddigood, degmooyin wax soo iibsi oo aad u wanaagsan, cunno ka timaadda dhammaan qaybaha adduunka, iyo cajaa'ibyo dabiici ah oo ku dhex jira masaafad maalin-safar ah.
Kuala Lumpur waa magaalo fidsan oo leh xaafado xaafadeedyo u muuqda kuwo weligood soconaya. Magaalada saxda ah waa 243 km2 (94 sq mi) Territory Federaal ah oo ay maamusho Hoolka Magaalada Kuala Lumpur waxayna ka kooban tahay sideed qaybood kuwaas oo loo sii kala qaybiyey ilaa 42 aag oo maxalli ah, inta badan ujeedooyin maamul. Degmooyinka soosocda ayaa loogu talo galay soo-booqdayaasha Kuala Lumpur.
Golden Saddex Xagalka (Bukit Bintang, Pudu)
Kuala Lumpur wuxuu u dhigmaa Xarunta Ganacsiga Dhexe (CBD) oo ku taal waqooyiga-bari ee Xarunta Magaalada Old. Aaggu wuxuu ku sii qulqulayaa meherado waaweyn, baarar iyo hudheelo shan xiddig leh, oo ay weheliyaan astaamaha caanka ah ee loo yaqaan 'Petronas Twin Towers'.
Xarunta Magaalada Old (Chinatown)
Kani waa udub -dhexaadka Kuala Lumpur halkaas oo aad ka heli doonto Xaruntii hore ee maamulkii gumaysiga, oo leh Fagaaraha Merdeka, Sultan Abdul Samad Building iyo Selangor Club. Degmadan waxaa kale oo ka mid ah Kuala Lumpur oo ah xaruntii hore ee ganacsiga Shiinaha oo qof walba uu hadda u yaqaan Chinatown. Sanadka 2024 -ka dabaqa ugu sarreeya Malaysia (PNB 118) wuxuu ku yaallaa qaybtan magaalada.
Matxafka Qaranka, Masjidka Qaranka, Beerta dhirta, Bird iyo Balanbaalis Parks, Orchid & Hibiscus Gardens, Matxafka Farshaxanka Islaamka iyo National Planetarium ayaa halkan ku yaal. In yar oo woqooyi laga socdo beerta waa Taallada Qaranka.
Koonfurta Magaalada (Goobaha lebenka, Bangsar, Bukit Persekutuan, Dooxada Dhexe, Seputeh)
Goobaha lebenka waa Kuala Lumpur Little India oo ay ka buuxaan dukaamo sareeye ah iyo maqaayado bariis caleen moos ah. Saldhigga weyn ee tareenka Kuala Lumpur, KL Sentral, ayaa ku yaal halkan. Bangsar waa makhaayad caan ah iyo xaafadaha baararka halka Dooxada Mid, oo leh Megamall, waa mid ka mid ah meelaha laga dukaameysto ee ugu caansan magaalada. Sebuteh waa guriga macbudka Thean Hou.
Waqooyiga Magaalada (Kampung Baru, Titiwangsa, Tuanku Abdul Rahman, Qalabka Chow)
Waxay ku taal waqooyiga-galbeed ee Saddex-xagalka Dahabka ah iyo ballaadhinta Xarunta Magaalada Old. Hoyga suuqyada casriga ah ee laga dukaameysto, suuqyada waddooyinka soo jireenka ah iyo xulashooyinka hoyga miisaaniyadda. Kampung Baru, tuuladii ugu dambaysay ee Malay ee Kuala Lumpur, waa janno cunno leh oo ay kuyaalaan meheradaha jidadka iyo makhaayadaha ku yaal goobta kampung dhaqameed.
Xaafadaha galbeedka (Bukit Damansara, Desa Sri Hartamas, Bukit Tunku, Taman Tun Dr Ismail (TTDI), Taman Bukit Maluri)
Waa xaafad weyn, degmooyinkan ka xiga galbeedka magaalada qaar ka mid ah jeebadaha xiisaha leh ee maqaayadaha iyo meelaha laga cabo. Bukit Kiara - keymo hawleed sare - waa meesha ugu caansan uguna socodka dheer ee KL. Degmadani waxay sidoo kale ku milmay qaybta woqooyi ee Petaling Jaya (PJ).
Xaafadaha bariga (Ampang, Desa Pandan, Taman Maluri, Cheras, Salak Selatan)
Waxay ku taal bariga magaalada, Ampang waxay hoy u tahay Kuala Lumpur ee Little Korea iyo inta badan safaaradaha shisheeye iyo guddiyo sare. Cheras waa xaafad ay ku nool yihiin dad badan oo Shiine ah halkan.
Xaafadaha waqooyiga (Sentul, Batu, Setapak, Wangsa Maju, Desa Melawati iyo kuwa kale oo badan)
Aaggan weyn ee ku yaal waqooyiga magaalada ayaa hoy u ah dhowr soojiidasho yaab leh oo dabiici ah, sida Godka Batu, Beerta Xayawaanka Qaranka iyo Machadka Cilmi baarista Kaymaha ee Malaysia.
Xaafadaha koonfureed (Taman Desa, Kuchai Lama, Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan, Alam Damai, Bukit Jalil, Sri Petaling iyo kuwa kale oo badan)
Degmadani ma xiiseyn karto dadka safarka ah, inkasta oo Kuala Lumpur's National Stadium iyo Dhismaha Isboortiga Qaranka Bukit Jaliil ay ku yaalliin halkan.
Marka laga soo tago magaalada Kuala Lumpur saxda ah waa magaalooyinka ku teedsan dayax gacmeedyada ee Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam, Klang, Port Klang, Ampang, Puchong, Selayang / Rawang, Kajang iyo Sepang, dhammaantoodna waxay ku yaalliin gobolka Selangor, oo ka kooban Kuala Lumpur. Isla isku-buuqsanaantaas, sidoo kale ku hareeraysan Selangor, waa dhulka federaalka ee Putra Jaya, oo ah tan Malaysia Qolyihii caasimada maamulka iyo garsoorka. Magaalooyinkani dhammaantood way isku milmayaan sidaa darteed way adkaan kartaa in la ogaado halka Kuala Lumpur ku dhammaato iyo Selangor oo bilaabmaya. Dhamaadka magaalooyinkani waa magaalo weyn oo loo yaqaan 'Greater Kuala Lumpur' ama badanaa, Dooxada Klang.
Hordhaca Kuala Lumpur
Sida ka jirta inta badan magaalooyinka Malaysia iyo magaalooyinka, Shiinaha Malaysiya wuxuu sameeyaa aqlabiyadda dadka, 55%, magaalada Kuala Lumpur. Malay (oo ah tirada ugu badan ee dadka Malaysia, guud ahaan) iyo Hindida Malaysiyaanka ah ayaa sidoo kale ku sugan magaalada tiro aad u badan, waxaana jira tiro aad u tiro badan oo muhaajiriin iyo shaqaale dhowaan ka yimid Koonfurta iyo Koonfur-bari Aasiya, Eurasia, iyo qurbajoog ka yimid waddamada reer galbeedka iyo Bariga Dhexe. Natiijadu waa isku darka dhaqammada isku milmay si looga dhigo Kuala Lumpur caasimad casri ah oo kala duwan.
Ka dib markii ay Merdeka (Independence), xafiisyada Xoghaynta Gumeysiga ee Naadiga Selangor Padang (beer) wuxuu noqday Suldan Abdul Samad Dhisme on Dataran Merdeka (Xorriyadda Fagaaraha)
Kuala Lumpur ayaa la sheegay inuu ku xirmay loollan aan rasmi ahayn oo uu la leeyahay magaalada ku dhow-magaalada Singapore. Qowmiyadaha Shiinuhu ku badan yahay ee Singabuur ayaa laga soocay Xiriirka Malay ee aqlabiyadda ku leh asal ahaan sababo la xiriira khilaafaadka xagga fikirka ah oo aan la is-fahmi karin. Singapore waxay ku dadaaleysay inay noqoto dowlad madax banaan oo hirgalinaysa waxayna la timid horumar deg deg ah, oo ay Maleysiayadu rabeen inay la socdaan maalgashiga Kuala Lumpur. Haddii Singapore leedahay garoon diyaaradeed oo heerka koowaad ah, sidoo kale KL ayaa leh. Markii Singapore ay heshay nidaam gaadiid magaalo oo waxtar leh, KL sidoo kale. Maaddaama Singapore ay noqotey mid nadiif ah oo cagaaran, sidaas oo kale KL. Meel kasta oo aad tagtid, waxaa ku yaal dhidid iyo xargaha cawska caamka ah ee manicured iyo jardiinooyinka u raaxeysta sida keynta - sida Singapore oo kale. Haddii Singapore ay leedahay jardiinno biyo ah iyo beer shimbir, KL sidoo kale. Wax la mid ah beerta orchid iyo baarka balanbaalis. Haddii Singapore dib u cusbooneysiiso oo ay rinjiyeeyso guryaheeda dukaanada gumeysiga leh midabada tutti frutti, sidaas oo kale KL. Haddii Singapore ay dhisto jardiinooyin mawduuc leh, KL sidoo kale way dhistaa. Iyo haddii Singapore ay higsaneyso inay noqoto mecca laga dukaameysto oo leh suuqyo badan oo laga dukaameysto iyo nuucyo kala geddisan oo dhan, sidaas oo kale KL. Waxa ay Singapore leedahay, KL ayaa isbarbar dhigta, badiyaa miisaanka weyn. Marka haddii aad joogtay Singapore, waxaad ku wada arki doontaa KL, xoogaa horaa loo arkay, ama dhanka kale.
Labada magaalo ee ku yaal marinka juqraafi ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba marinka Bangkok-Jakarta ayaa doorbiday koritaankooda. Labada magaalo waxaa laga dhisay isla waxyaabaha maadiga ah, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin: dhaqanka Shiinaha ayaa aad ugu badan Singapore.
Taariikhda Kuala Lumpur
Waxa la aasaasay sanadkii 1857 intii uu jiray xukunkii ingiriiska oo ahaa a daasadda macdanta, Kuala Lumpur waa mid cadaalad ku cusub ilaa magaalooyinka Malaysia ay aadaan oo aan lahayn taariikhda hodanka ah ee Georgetown ama Malacca. Guusha ka-soo-saarka macdanta, Kuala Lumpur wuxuu bilaabay inuu kobco laakiin wuxuu dhibaatooyin ku qabay dagaalladii kooxaha dabayaaqadii 1800s. Tan ka dib, Kuala Lumpur waxay la kulantay nasiib xumo kale ka dib markii in badan oo magaalada ah ay ku gubteen dab weyn maadaama dhismooyinka badankood laga dhisay alwaax iyo caws. Sidaa darteed dhismayaasha Kuala Lumpur waxaa loo baahday in lagu dhiso leben iyo leben. Sannadihii ugu horreeyay ee qallafsan ka dib, Kuala Lumpur wuxuu bilaabay inuu barwaaqoobo waxaana caasimad looga dhigay Dowladaha Malay ee Federated 1896.
Inta lagu guda jiro Dagaalkii labaad ee dunida, Kuala Lumpur iyo Federaal Malay States waxaa qabsaday Jabaan intii u dhaxeysay 1942 ilaa 1945. Inta lagu jiro xilligan dhaqaalihiisu gebi ahaanba waa istaagay. Wax yar ka dib markii Ingiriisku la soo noqday awoodda waxaa lagu dhawaaqay in Dawladaha Federaaliga ah ee Malay ay noqdaan Midowga Malayan oo ay ka shaqeeyaan madaxbannaanida. Sannadkii 1952, Kuala Lumpur waxay ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horreeyay ee Midowgii doorashada ka dhacay. Malaya's madax-bannaani waxaa lagaga dhawaaqay 1957 dad aad u tiro badan hortooda wixii markii dambe la magacaabay Garoonka Merdeka (Independence Stadium), iyo Kuala Lumpur waxay sii wadeen caasimada cusub ee qaranka.
Sannadkii 1972, Kuala Lumpur waxaa la siiyay meeqaam magaaladeed illaa 1974-kii waxay noqotay Gobol ka tirsan Dowladda Federaalka ee Maleesiya iyada oo gaar u ah, sidaa darteedna waa loo waayey cinwaankeedii ahaa magaala-madaxda Selangor. Kobaca dhaqaale ee 1990s wuxuu keenay Kuala Lumpur astaamihii caadiga ahaa ee magaalo casri ah, laakiin waxaa si ba'an u haleelay Dhibaatada dhaqaale ee Aasiya ee 1997, kaas oo hakiyay dhaqaalihii Malaysia una horseeday in laga tago ama dib loo dhigo mashaariic badan oo dhisme. Maanta, Kuala Lumpur waxay noqotay magaalo casri ah, oo ay ka buuxaan dhismayaal dhaadheer iyo nidaam gaadiid oo casri ah, waxayna ka mid tahay Xarumaha ugu waaweyn dunida ee Bangiyada islaamka. Iyada oo ay taasi jirto, Kuala Lumpur wali wuxuu hayaa qaar ka mid ah soo jiidashada taariikhiga ah.
Maadaama Kuala Lumpur ay 3 digrii woqooyi ka xigto Equator, waxaad filan kartaa cimilada kulaylaha sanadka oo dhan. Waxaa ku gaashaaman buuraha Titiwangsa ee bariga iyo Sumatra dhanka galbeed, heerkulku wuu ka qabow yahay magaalooyinka kale ee ku yaal Jasiiradda Malaysia. Filo maalmo qorax leh oo leh heerkul ka sarreeya 30 ° C (86 ° F) iyo fiidkii waxoogaa yar oo qabow, gaar ahaan marka galabtii galabtu dhacdo oo qoyaanku sarreeyo. Roobku wuxuu noqon karaa mid goos goos ah oo aad u daadad badan mararka qaar, laakiin badanaa ma raago waqti aad u dheer. Intii lagu guda jiray xilli qoyan, agagaarka Oktoobar ilaa Maarso, monsoon waqooyi-bari waxay keentaa roobab culus oo mararka qaarkood daadad gelin kara meelaha qaar ee Kuala Lumpur. Bilaha ku dhow Juun iyo Julaay waxaa loo kala saari karaa kuwa xilli qalalan, laakiin xitaa markaa kadib si joogto ah ayuu u da'ayaa
Mararka qaarkood, dabka kaymaha ee ka yimaada Sumatra inta udhaxeysa May ilaa Oktoobar, qulqulatadu waxay dabooli kartaa magaalada iyo gobollada ku hareeraysan, waxaana ugufiican inaad gudaha kujirto haddii aad qabto neef.
Maaddaama cimiladu kulul tahay oo qoyan tahay maalintii, isku day inaad si khafiif ah u lebis haddii aad filayso inaad banaanka joogtid iyo, inkasta oo ay umuuqato wax iska cad, ha ilaawin inaad biyo ahaato. Sidoo kale maskaxda ku hay in masaajidada iyo qaar ka mid ah macbadyada ay leeyihiin xirmooyinka dharka adag, in kastoo in badan oo ka mid ah ay xirtaan goonnada dharka si ay kuu daboolaan haddii aad si ku habboon u labbisan tahay. Haddii aad ku aragto inay aad u kulushahay inaad banaanka ka joogtid, tixgeli inaad aado suuq laga dukaameysto si aad u nasato oo ugu shaqeyso kaarka deynta ee raaxada hawo qaboojiyaha leh.
Iyada oo ku habboon caasimadda waddanka, Malay waxaa si guud looga hadlaa oo u fahmaa dadka deggan Kuala Lumpur.
Si kastaba ha noqotee, maadaama ay tahay magaalada ugu weyn ee Malaysia, Kuala Lumpur waxay sidoo kale hoy u tahay Malaysiyaan ka kala yimid qowmiyado iyo dhaqammo kala duwan, tanina waxay inta badan ka muuqataa tirada luqadaha ay adeegsadaan dadka deegaanku nolol maalmeedka. Ku luuqadda Faransiiska bulshada Shiinaha waa Cantonese, inta badan qowmiyadaha Shiinaha waxay ku hadli karaan Cantonese iyadoon loo eegin lahjadooda hooyo, iyadoo tiro aad u tiro badan ay sidoo kale awoodaan inay ku hadlaan Mandarin. Kuala Lumpur sidoo kale waxaa ku nool dad badan oo Hindi ah, badankooduna waxay ku hadlaan afafka Tamil.
English sidoo kale si ballaaran ayaa looga hadlaa, iyo dalxiisayaasha ku hadla Ingiriisiga guud ahaan waa inaysan dhibaato ku qabin inay ku wareegaan.
Nidaamyada gaadiidka Malaysia si wanaagsan ayey u shaqeeyaan, heerarka gobolka. Diyaaradaha, tareenada, basaska, iyo tagaasida waxay kuxiran yahiin nidaam uu u maleynayo oo ay dhisteen, hadii uusan aheyn Teuton amarka jecel, uguyaraan hiwaayad u heellan. Ujeeddooyinka qorsheeyayaashu waa nidaam casri ah oo casri ah, qurux badan, oo qaab Yurub u eg oo aad uga fog bilowga magaalada ee hooseeya. Xaqiiqdu waa cod B + oo wali waddo dheer loo socdo ka hor inta aan kor lagu dhufan. Jahwareer horudhac ah oo xarfaha hore iyo soo gaabin ah qorsheeye safar safaradeedii ugu horreeyay ee KL, waxayna qaadan doontaa ugu yaraan maalin si loo qeexo qorshaha waxyaabaha.
Kuala Lumpur waxaa ka shaqeeya laba garoon diyaaradeed: Madaarka Caalamiga ah ee Kuala Lumpur (KLIA) () iyo Gegada Diyaaradaha ee Sultan Abdul Aziz Shah (Madaarka Subang,). KLIA waxaa adeegsada ku dhowaad dhammaan shirkadaha duulimaadyada ee u duulaya Kuala Lumpur halka Madaarka Subang uu ku xaddidan yahay shirkadaha diyaaradaha ee leh diyaaradaha turboprop.
Madaarka Caalamiga ah ee Kuala Lumpur
Madaarka koowaad ee u adeega Kuala Lumpur, 50 km koonfur ka xigta Kuala Lumpur ee degmada Sepang ee Selangor. Gegada dayuuradaha ayaa la furay 1998-dii waxaana laga beddelay garoonka diyaaradaha Sultan Abdul Aziz Shah ee ku yaal Subang, kaas oo hadda kaliya loo isticmaalo kiraysiga iyo duulimaadyada ganacsiga ee turboprop. In ka badan 50 diyaaradood ayaa ka soo wac KLIA. Gegada diyaaraduhu waxay leedahay laba terminaal, oo ay la socdaan Malaysia Airlines iyo xamuullayaal kale oo waaweyn oo jooga “weyn” KLIA, iyo Air Asia iyo kuwa kale ee qiimaha jaban isticmaala. KLIA2. Waxay kuxiran yihiin midba midka kale (3 daqiiqo) iyo magaalada (28-33 min) tareenka KLIA Ekspres.
Gegada Diyaaradaha ee Sultan Abdul Aziz Shah
Badanaa waxaa loo yaqaan Madaarka Subang, wuxuu ahaa gegida dayuuradaha ee magaalada ilaa laga furay KLIA, waxaana loogu talagalay diyaaradaha turboprop. Gegada dayuuradaha ayaa aad ugu dhow Xarunta Magaalada oo ka cidhiidhsan KLIA, taas oo ka dhigi karta meel ay ku habboon yihiin kuwa ka duulaya Singapore, Indonesia, Thailand ama qaybaha kale ee Malaysia. Gegada dayuuradaha ayaa 25 km u jirta Bartamaha magaalada habka ugu habboon ee lagu tagi karaana waa tagsi. Beddelku waa in la qaato Deg deg ah KL baska U81 (meesha loo socdo: Subang Suria / Mah Sing) laga bilaabo Terminal Jalan Sultan Mohammad oo ku xiga Saldhiga Pasar Seni LRT, kaas oo dhaafaya garoonka diyaaradaha. Qiimaha tikidhku waa RM3 hal wado wuxuuna qaadaa ugu yaraan 40 daqiiqo taraafikada cad. Waxay qaadan kartaa ku dhowaad 1hr 30min inta lagu jiro saacadda ciriiriga ugu badan. Gegada waxaa u adeega diyaaradaha:
Berjaya Hawada waa shirkad diyaaradeed oo maxalli ah iyo mid goboleed, taas oo diiradda saarta meelaha loo dalxiis tago iyo meelaha jasiiradaha loo tago. Waxay ku duushaa inta udhaxeysa Madaarka Subang iyo Langkawi, Pangkor Island, Penang, Redang Island, Tioman Island iyo caalamkaba ilaa Hua Hin, Thailand.
Firefly waa shirkad hoosaad ka ah shirkada duulimaadyada ee Malaysia oo ka bilaabatay shirkada Subang dabayaaqadii 2007 waxayna u shaqeysaa sidii shirkad diyaaradeed oo loo yaqaan 'turboprop airline'. Malaysia gudaheeda duulimaadka wuxuu u kala gooshaa Subang iyo Alor Setar, Johor Bahru, Kerteh, Kota Bharu, Kuala Terengganu, Langkawi iyo Penang. Intaa waxaa dheer, Firefly sidoo kale waxay ka shaqeysaa duulimaadyo caalami ah oo ka socda gobolka u dhexeeya Subang iyo Indonesia - Batam, Medan, Pekanbaru; Thailand - Hat Yai, Koh Samui; iyo Singapore.
Diyaaradda Malindo waa diyaaraddii ugu dambeysay ee soo gasho suuqa duulimaadyada ganacsiga ee Malaysia waana shirkad hoosaad ka ah shirkadda diyaaradaha ee Lion Air ee dalka Indonesia. Diyaaradda waxay u kala gooshaa Subang iyo Johor Bahru, Kota Bharu iyo Penang, iyadoo qorshuhu yahay in intaas ka sii ballaadho.
Basasku waa ikhtiyaar gaadiid raqiis ah oo raaxo leh oo caan ah oo ay leeyihiin dadka reer Malaysia, adeegyaduna waxay gaarayaan dhammaanba geesaha Malaysia iyo sidoo kale Thailand iyo Singapore. Marka layaab malahan in Kuala Lumpur ay dhowr leedahay boosteejooyinka basaska (stesen bas or hentian) si loo maareeyo adeegyada basaska masaafada dheer. In kasta oo kakanaanta shabakadu jirto qaar ka mid ah basaska ka tagaya saldhigyo gaar ah iyadoo ku xiran gobolka ay u safraan ama ka soo baxaan. Si kor loogu qaado, basaska qaar ayaa laga yaabaa inay yimaadaan goobo kale oo ay ku jiraan Kuala Lumpur Railway Station, Bangsar LRT Station, Corus Hotel iyo Xarunta Dalxiiska ee Malaysia (MTC). Had iyo jeer u xaqiiji shirkadda baska halka basku u baxayo si aadan u seegin baskaaga. Xaaladaha qaarkood waxaad u baahan kartaa inaad ku beddelato tigidhkaaga a kaarka lagu raaco, markaa isku day inaad timaado boosteejada baska 10-15 daqiiqo kahor waqtiga bixitaanka, in kastoo shirkadaha basaska ay soo jeedinayaan 30 daqiiqo.
Pudu Sentral (hore Hentian Puduraya), Jl Pudu (oo ku xidhan Plaza Rakyat LRT Station). Saldhigga basaska ugu badan ee Kuala Lumpur, oo u adeega waqooyiga basaska. Pudu wuxuu helay waji weyn iyo hawo qaboojiye sanadkii 2011, hadana wuu istaagi karaa garoonka diyaaradaha. Si kastaba ha noqotee, tikidhada iyo macluumaadka wali maahan meel dhexe, sidaas darteed helitaanka baska ku xiga ee aad u socoto weli waxay u baahan tahay socod badan. Tigidhada adeegyada ka baxa saldhigyada kale sidoo kale waa la heli karaa. Tagaasidu waxay kujiraan socodka saldhiga idaacada wayna riixi karaan mana isticmaali karaan mitirka. Had iyo jeer kala hadal sicirka ka hor haddii aad rabto taksi ama beddelka ayaa ah inaad u kacdo saldhigga LRT ee kuu dhow.
Terminal -ka Bersepadu Selatan (TBS), Jl Terminal Selatan (oo ku xiran Bandar Tasik Selatan Station). Terminalkan weyn ee casriga ah wuxuu u adeegaa dhanka koonfureed u socda meelaha ay tagayaan, oo ay ku jiraan Malacca, Johor Bharu iyo Singapore. In kasta oo ay ka yartahay bartamaha magaalada hadana waxay si aad ah uguxirantahay gaadiidka dadweynaha iyo tagaasida. Saddex adeeg oo tareen ah, KTM Komuter, Sri Petaling LRT iyo KLIA Transit ayaa ka soo waca rugtan basaska, taasoo fududeyneysa in laga soo gaaro Kuala Lumpur iyo KLIA.
Hentian Duta (Terminal-ka Duta Bus), Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin. Saldhig bas oo yar oo u adeega xawaare waqooyiga adeegyada. Ma jiraan adeegyo gaadiid dadweyne oo toos ah oo taga saldhigan. Joogsiga baska ugu dhow waa 500 m woqooyi-galbeed ee istaanka u dhow Masjidka Dowlada Dhexe. Basaska halkaas jooga waxay u adeegaan KL Sentral. Way ka sahlan tahay in lagu soo xiro taksi.
Terminalka Baska ee Pekeliling, Jl Tun Razak (oo u dhow Titiwangsa saldhigyada LRT & Monorail). Terminal-kan ayaa wax ka qabta adeegyada basaska qaarkood East Coast, oo ay ku jiraan Taman Negara iyo adeegyada basaska Maxalliga ah.
Waxaa jira shirkado badan oo basas ah oo yimaada kana taga Kuala Lumpur. Hoos waxaa ku yaal liiska shirkadaha waaweyn. Tani macnaheedu maahan liis dhammaystiran.
Marmar ☎, +60 3 2070-3300 waa shirkada basaska masaafada dheer ee Malaysia. Qeybta dhaqaalaha waxay u amba baxeysaa garoonka Lavender Street ee Singapore saacada 08:45, 10:30, 13:30, 17:30, 22:30 & 23:59 - RM30 hal wado oo waxay qaadataa 5 saac.
Konsortium Bas Ekspres Semenanjung 60 + 3 2070 1321 XNUMX waxay leedahay dhowr basas maalin kasta oo / ka yimaada dhismaha 'Golden Mile' ee ku yaal Singapore.
Alisan Dahabka Tababaraha Express, Hentian Pudu Raya, ☎ +60 3 2032 2273 waxay leeyihiin seddex bas maalin kasta kuwaas oo ka taga Kuala Lumpur kuna sii jeeda Hatyai, safarka 09:00, 22:00, iyo 22:30, tigidhka agagaarka RM45, safarka 7-saac.
StarMart Express +60 3 21431666 Ka tagida Singapore kana timid Bukit Bintang. Tigidhada halkaas laga heli karo. RM45 oo ku xigta Berjaya Times Suare (Jalan Imbi, oo ku hoos jirta saldhigga monorail)
Tareenka ugu safro Kuala Lumpur
Saldhigga Tareenka ee Angola-Indian-ku-Kuala Lumpur
Dawladu way lahayd Keretapi Tanah Melayu (Malayan Railway ama KTM) waxay ku shaqeysaa isdhexgalka (antarabandar) Adeegyada tareenka naaftada ee ku yaal Malaysia oo dhan. Tareenka imanaya Kuala Lumpur waxay ka wacaan Xakunka KL, xarunta gaadiidka casriga ah ee Brickfields, oo koonfurta ka xigta Xarunta Magaalada, waxayna ka hawlgashaa meel fog sida Singapore, Hat Yai ee Thailand iyo Kota Bharu oo ku taal Peninsular Malaysia waqooyi-bari. Adeegyada tareenka waa kuwo qiimahoodu macquul yahay, waxayna u shaqeeyaan sidii tareen maalin iyo habeenba leh oo leh ikhtiyaarro fasal oo kala duwan. Tareenada maalinlaha ah waxaa ka mid ah fursadaha fadhiga oo aan fadhiyin iyo kuwa aan fadhiyin oo kaliya, halka tareenada habeenku ay leeyihiin laba qol oo gaar loo leeyahay iyo qorshe furan oo sariiraha sariirta leh oo leh daahyo (oo la mid ah tareenada Thai) ee asturnaanta. Ikhtiyaarada fadhiga ayaa sidoo kale diyaar u ah tareenada habeenkii.
The Adeegga Tareenka Korontada (ETS), oo ah shirkad KTM ah, waa adeeg tareen cad oo maalinle ah oo ka shaqeeya inta u dhaxeysa Padang Besar, Perlis iyo Kuala Lumpur. Tareenada ETS ayaa soo waca Saldhigga Tareenka ee Kuala Lumpur, xaruntii hore ee weyn, marka lagu daro KL Sentral. Saldhiggii hore ee Kuala Lumpur Station waxaa ka shaqeeya tareennada KTM Komuter iyo agagaarka Saldhigga Pasar Seni LRT ee khadka Kelana Jaya. Haddii aad u baahan tahay inaad ku xirnaato khadadka tareennada kale waxaa lagula talinayaa inaad ku sii socoto KL Sentral. Adeegyada tagaasida ayaa laga heli karaa labada saldhigba, laakiin waxaad ka heli doontaa wax badan KL Sentral waxaadna ka iibsan kartaa tigidh taksi ah marka ay jiraan si aanay darawaladu uga badin karin. Eeg qaybta helitaanka agagaarka wixii macluumaad dheeraad ah.
tigidhada tareenada KTM iyo ETS waxaa laga iibsan karaa xafiiska tikidhada ee KTM Intercity oo ah heerka labaad ee KL Sentral ama saldhigyo kale oo ay ku tababaraan tareenadu. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa tigidhkaaga khadka tooska ah ee KTM e-booking ilaa laba bilood ka hor, laakiin xusuusnow inaad daabacdo tikidhada elektaroonigga ah.
Belmond waxay maamushaa tareenkeeda dalxiiska raaxada Bariga & Oriental Express laba illaa saddex jeer bishii inta u dhexeysa Bangkok, Kuala Lumpur iyo Singapore. Qiimaha tigidhku wuxuu la jaan qaadayaa extravaganza-ka saaran, laga bilaabo US $ 3,000.
Wadooyinka ugu muhiimsan ee Jasiirada Peninsular Malaysia waxay u baxaan / ka yimaadaan Kuala Lumpur. Magaaladu waxay ku taal bartamaha bartamaha Jidka Weyn ee Koonfurta-Woqooyi (Wadada weyn) (NSE; nambarada dariiqa E1 iyo E2) oo ka bilaabma xadka Malaysia iyo Thailand ee Bukit Kayu Hitam, Kedah ilaa Johor Bahru ee koonfurta, dhinaca Malaysia ee Causeway ilaa Singapore. Wadooyinka waaweyn ee laga baxo Kuala Lumpur ee NSE waa Jalan Duta (xagga woqooyi) iyo Sungai Besi (dhanka koonfureed) The Wadada Karak (E8), oo hadhow isu beddela Wadada East East Expressway, isku xidha Kuala Lumpur iyo gobolada Xeebta Bari ee Pahang, Terengganu iyo Kelantan.
Kuwa aan dooneynin inay bixiyaan khidmada, Kuala Lumpur waxay ku socotaa Wadada Federaalka ee Koowaad (“Wadada Jirridda”) taas oo, sida NSE, u dhex marta dhammaan gobollada Galbeedka Xeebta ee Jasiiradda Peninsular Malaysia laga bilaabo Bukit Kayu Hitam, Kedah ilaa Johor Bahru.
Kuwa ku socdaalaya Wadada Xeebta Galbeed (Federal Route Five) waa inay ka baxaan wadada Klang oo ay aadaan Kuala Lumpur iyaga oo sii maraya Wadada Federalka.
Kuala Lumpur maahan badda dhinaceeda, sidaa darteed suurtagal maaha in si toos ah doonta lagu galo. Dekedda u dhow Port Klang, oo qiyaastii 40 km galbeed ka xigta Kuala Lumpur, waxay u adeegtaa sida dekedda weyn ee gobolkan. Ferries waxay ka shaqeeyaan adeegyada caalamiga ah Sumatra, Indonesia iyo adeegga gudaha ee Pulau Ketam. Doomaha maraakiibta sidoo kale ka wac Port Klang, inta badan wadada loo maro meelaha kale ee Aasiya, adoo u oggolaanaya safar maalinle ah Kuala Lumpur. Wixii macluumaad dheeraad ah tixraac maqaalka Port Klang.
Nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Kuala Lumpur ayaa si ku filan loogu soo saaray inuu noqdo mid si hufan waxtar u leh oo ku habboon, laakiin qol badan oo lagu hagaajiyo ayaa ku jira isdhexgalkiisa. Magaalada, sida magaalooyin badan oo soo koraya, waxay la liidataa curyaaminta ciriiriga baabuurta xilliyo maalintii oo dhan. Saacadaha degdegga, tixgeli inaad isku darto habab kala duwan oo gaadiid ah.
Rail wuxuu ku yimaadaa lix dhadhan oo kala duwan, dhammaantoodna waxay ku hoos jiraan shabakadda RapidKL marka laga reebo KTM Komuter.
LRT Kelana Jaya (waxtar u leh helitaanka aagga KLCC iyo Chinatown)
LRT Ampang iyo LRT Sri Petaling (labadan sadar waxay raacayaan isla wadadaas ilaa ay uga kala baxaan Chan Sow Lin)
KTM Komuter (Faa'iido badan uma leh dalxiisayaasha ka sokow tagitaanka Batu Caves ama Mid Valley Mall)
KL Monorail (Wuxuu maraa aagag badan oo muhiim ah, ugu horreyn degmada laga adeegto ee Bukit Bintang)
Khadadka oo dhan, marka laga reebo khadadka Ampang / Sri Petaling LRT waxay ku safrayaan xarunta ugu weyn ee gaadiidka Kuala Lumpur, Xakunka KL. (The Sungai Buloh-Kajang MRT istaago at Saldhigga Muzium Negara Si kastaba ha noqotee in la gaaro khadadka Ampang / Sri Petaling ee ka socda KL Sentral waxay ku lug leedahay safar fudud oo loo maro Kelana Jaya LRT illaa iyo masjidka Jamek.
Dhammaan ogeysiisyada waxaa lagu sameeyaa Malay iyo Ingiriis, ha ahaadaan kuwo otomaatig ah iyo haddii kale.
The Taabo 'n Go kaarka (RM10 ee saldhigyada waaweyn, dukaamada raaxada sida MyNews) waxaa loo isticmaali karaa dhammaan khadadka, oo ay ku jiraan KLIA Express iyo Khadadka Transit-ka KLIA. Kaarku wuxuu u shaqeeyaa sida kaararka Oyster ama Octopus oo sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo kharashka. Waa la soo rogi karaa meel kasta oo ka baxsan MAGAALADA tikidhada tikidhada RapidKL ee dhammaan khadadka waxay xayiraan khadka MRT (laga bilaabo Maajo 2017); raadso dukaan ku habboon ama kaalin shidaal. Waxaa jira qiimo dhimis qiimo jaban oo qiimo jaban haddii qofku isticmaalo qaab lacag la'aan ah oo lacag bixin ah.
Khadadka LRT horey magacyo kala duwan ayey u lahaayeen (Kelana Jaya line wuxuu ahaa khadka PUTRA; khadka Ampang wuxuu ahaa xariiqa STAR), ha la yaabin inaad aragto calaamado ka duwan magacyada halkaan ku qoran.
Saldhigga “KL Sentral” ee KL Monorail uma dhowa KL Sentral. Wadada udhaxeysa labadooda waa mid calaamadeysan oo guud ahaan waxay leedahay dad joogta ah oo aad raaci karto. Waxaa jira bangi fidiyayaal ah oo u horseedaya suuq laga dukaameysto, Nu Sentral dhinaca KL Sentral concourse ugu dhow albaabka laga galo KLIA Transit. Raac tiirarka calaamadaha iyo birta calaamadeynta sagxadda dhulka illaa aad ka gaarto wiishka kiciyaha. Hoos uga deg hal heer, xarunta monorail-na waxaa laga arki doonaa albaabbada muraayadda.
Tareenka tareenka degdega ah (LRT, monorail iyo MRT) waxay raacaan muddooyinka isbeddela waqtiga maalinta iyo maalinta ee usbuuca. Jadwalka khadadka ayaa caadi ahaan ah 4-7 daqiiqo dhamaadka usbuuca, iyo 2-3 daqiiqo saacadaha ugu sareeya. Filo sugitaan yar oo dheereeya. Carqaladeynta adeegga ee safarka degdegga ah ayaa dhif iyo naadir ah.
Helitaanka naafada ayaa ku kala duwan khadadka. Qadka MRT waa mid si buuxda u naafo ah oo marin loo heli karo, xitaa wuxuu leeyahay tasiilaad loogu talagalay maqalka oo ku liita ogeysiisyada dhuumaha iyadoo loo marayo qalabka gargaarka maqalka. Khadadka LRT Kelana Jaya iyo Ampang / Sri Petaling waa inta badan ay heli karaan dadka indhaha la 'iyo kuwa curyaamiinta ku xiran, in kasta oo marka laga baxo saldhigga ay adag tahay in lala wareego iyadoo aan la helin caawiye. Khadka khadka tooska ah ee loo yaqaan 'KL Monorail' ma ahan mid curyaanku ku habboon yahay (laakiin wuxuu leeyahay astaamo taabasho leh), laakiin wiishashka ayaa si tartiib ah loogu rakibay khadka. Jidka Sun BRT sidoo kale waa mid inta badan la heli karo. Helitaanka dadka naafada ah ee ku teedsan khadadka KTM Komuter way ku kala duwan yihiin saldhigga, mana aha in lagu tiirsanaado sidii la siiyay.
Nidaamku wuxuu qaadan karaa xoogaa in lagu barto, iyadoo ay ugu wacan tahay mararka qaarkood go'aamada naqshadda aan macquul ahayn tusaale ahaan is-weydaarsiyada qaarkood. Ha ka waaban inaad weydiiso xubin ka mid ah shaqaalaha idaacadda (badankood waxay awood u yeelan doonaan inay si wanaagsan ugu hadlaan Ingiriisiga si ay u siiyaan tilmaamo) tilmaamaha, ama wehel wada socdaal ah (kuwa sida hufan u lebbisan waxay u badan tahay inay si fiican ugu hadlaan Ingiriisiga). Boodhadhku waa saaxiibkaa, caadi ahaan way iska cad yihiin waxayna ku wada qoran yihiin Malay iyo Ingiriisi.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan khadadka
The MRT wuxuu leeyahay hal sadar, kan Sungai Buloh - Kajang khadadka, kaas oo ka soo gala xaafadaha Sungai Buloh oo uu sii maro degmooyin badan oo hodan ah (tusaale Mutiara Damansara) ka hor inta aanu ku hakan Kajang. Waxaa ku yaal saldhigyo isweydaarsi Sungai Buuloh (oo leh KTM), Muzium Negara (oo ay la socdaan KTM, Kelana Jaya LRT, ERL, iyo KL Monorail - waxay u baahan tahay xoogaa socod ah oo lagu maro xiriiriyaha lugta ee KL Sentral), Pasar Seni (oo leh LRT Kelana Jaya),Bukit Bintang (oo leh KL Monorail), Maluri (oo leh LRT Ampang Line) iyo Kajang (KTM).
Tareenka Kelana Jaya Line
The LRT waa nidaam metro awood dhexdhexaad ah (in kastoo xarfaha LRT ay u taagan yihiin Transit Rail Rail) oo ka kooban saddex xariiq.
The Khadka Ampang iyo Khadka Sri Petaling ku milmaan xarunta 'Chan sow lin lin' oo aad ku wada socotid isla madal dhammaan saldhigyada saldhigga Sentul Timur. Khadkan waxaa loo isticmaali karaa marin u ah Chinatown iyo Pudu Sentral Bus Station ee xarunta Plaza Rakyat. Waxaa jira isweydaarsiyo fudud oo fudud marka Titiwangsa (monorail), Buuraha Putra (LRT Kelana Jaya), Daldala Tuah (KL Monorail), Masjid Jamek (LRT Kelana Jaya). Isweydaarsiga PWTC (KTM), Bandaraya (KTM) iyo Suldaan Ismaaciil (KL Monorail) waxay u baahan tahay in laga baxo aagga lacagta laga bixiyo ee saldhigga isla markaana la lugeeyo masaafo, mararka qaarkoodna masaafo dheer oo aan lahayn kor u qaadayaal iyo wiishash.
The Kelana Jaya safka wuxuu maraa dhowr meelood oo dalxiis oo muhiim ah oo ay ku jiraan saldhigga Pasar Seni ee Chinatown iyo suuqa dhexe, xarunta KLCC ee Petronas Towers iyo Suria KLCC Center shopping. Waxa kale oo ay joogsataa agagaarka dukaamaysiga iyo cuntada cuntada ee Subang Jaya, kuwaas oo mudan joogsi. Intaa waxaa sii dheer waxaad ka soo degi kartaa saldhigga Masjid Jamek (rugtan waxay noqon kartaa mid jahawareer leh, fadlan hubi jihada aad u socotid, taas oo lagu tilmaamayo joojinta halkii laga fiiri lahaa jiheeyaha) oo aad u wareejiso khadadka Ampang/Sri Petaling adigoon ka tagin aagga tigidhka . Saldhigyada muhiimka ah ee is -weydaarsiga ayaa yaal Xakunka KL iyo Masjid Jamek.
The KL Monorail waa xariiq gebi ahaanba sarreysa oo dhex wareegaya Saddex-xagalka Dahabka ee wareegga wareegga ah. U adeegso xariiqdan marinka Bukit Bintang, oo ah aag ganacsi oo weyn, ama Bukit Nanas, oo loogu talagalay kubbadda Jalan P. Ramlee iyo munaaradaha Petronas. Qiimaha ayaa inyar ka qaalisan LRT. Laga bilaabo 2017-ka, monorail-ku wuxuu si aad ah u camiran yahay saacadaha ugu sarreysa, iyo sugitaanka daqiiqadda 8-12 ee tareenka ayaa marmar dhaca. Bukit Nanas idaacadda waxay ku qoran tahay inay ku beddelato LRT Kelana Jaya laakiin la soco tani waxay u baahan tahay socod 200-m ah, laakiin waxay ku socotaa marin lugeed oo gabbaad ah. Laga bilaabo Juun 2017, khadka monorail wuxuu ku socdaa mowjadaha hoose cillad farsamo awgood - Bukit Bintang (degmada wax laga iibsado) waxaa lugta looga tagi karaa KLCC iyadoo la sii marinayo KLCC-Bukit Bintang Pedestrian lugkway, iyadoo la raacayo nidaamka basaska GoKL iyo Bukit Bintang Saldhiga MRT.
The KTM Komuter waa adeegga tareenka raaca oo ka kooban laba khad oo ku kulma Xarunta Magaalada kuna dhammaada xaafadaha. Adeeggu ma aha mid soo noqnoqda ama waxtar leh sida tareenka kale ee Kuala Lumpur mana aha wax la yaab leh in tareenadu soo daahaan. Iyada oo ay taasi jirto saamiyada duudduubani waa mid casri ah oo qiimahoodu wuu ka jaban yahay LRT iyo Monorail. KTM Komuter -ku wuxuu aad ugu fiican yahay socdaalka Batu Caves iyo Midvalley Mega Mall.
The Xawaaraha Tareenka (ERL) waxay dhexmartaa inta udhaxeysa KL Sentral iyo Kuala Lumpur International Airport (KLIA) oo leh 2 nooc oo adeeg tareen ah, KLIA Ekspres iyo KLIA transit. The KLIA Ekspres adeegku wuxuu soconayaa joogsi la'aan inta udhaxeysa KL sentral iyo KLIA, waxayna qaadataa 28 daqiiqo, halka Gaadiidka KLIA adeegyadu waxay istaagaan Salak Tinggi, Putra Jaya / Cyberjaya iyo Bandar Tasik Selatan en wadada, qaadashada 36 daqiiqo. Qiimaha tikidhada ayaa ku kacaya RM55 hal dhinac oo aan joogsi lahayn iyada oo loo marayo KLIA Ekspres laga bilaabo Juun 2017.
Xidhiidhkii hore ee udhaxeeyay khadadka kaladuwan aad ayuu u liitay, laakiin casriyeynta nidaamka ayaa gacan ka gaysatay isdhexgalka dhowr xarumood oo muhiim ah oo ku teedsan khadadka LRT iyo Monorail iyada oo aan la iibsan tikityo gooni ah. In la kala wareejiyo Kelana Jaya safka iyo Khadadka Ampang / Sri Petaling, soo deg Masjid Jamek or Buuraha Putra (dhamaadka dhamaadka labada sadar). Kala wareejinta udhaxeysa khadadka KL Monorail iyo khadadka Ampang / Sri Petaling ka dibna midkoodba haleelo Daldala Tuah or Titiwangsa idaacadaha. Marka laga soo tago saldhigyada is-weydaarsiga ee kor lagu soo sheegay, sida keliya ee loogu kala wareejin karo xariiqyada waa in la iibsado tikit gooni ah oo lug kasta ah oo laga yaabo in lagu lugeeyo safarka qaarkood. Si aad ugu kala wareejiso khadka MRT iyo monorail, hadda ka deg Bukit Bintang. Si aad isugu wareejiso inta udhaxeysa MRT iyo LRT Kelana Jaya, hada ka dag Pasar Seni.
Laba-Decker KL Hop-on Hop-off basaska dalxiis ee daawashada waxay u adeegaan 42 meelood oo xusid mudan. Diyaaradda waxaa ku jira Wi-Fi bilaash ah. Faallooyinka macluumaadka waxaa lagu bixiyaa samaacadaha dhagaha. Tigidhada (oo shaqeynaya 24 ama 48 saac) waxay bixiyaan adeegsi aan xadidnayn inta ay shaqeynayaan. Caruurta ka yar 5 sano waxay raacaan lacag la’aan. Basaska waxaa loo qorsheeyay nus saac kasta laakiin sugitaanku wuxuu noqon karaa ilaa iyo laba saacadood cariiriga gawaarida awgeed, markaa isku day inaad sare u qaaddo adeegsiga saacadaha ka baxsan saacadaha degdegga.
The free adeegga baska Tag KL oo ku yaal Bartamaha Ganacsiga (CBD) oo leh afar waddo oo basas wareeg ah. Khadka Purple wuxuu ka bilaabmayaa Pasar Seni wuxuuna u safrayaa aagga wax laga iibsado ee Bukit Bintang, halkaas oo uu kula xiriiro Khadka Cagaaran ee wareegaya KLCC. Khadka Cas wuxuu isku xiraa Waqooyiga CBD iyo Koonfurta, isagoo ku xiraya KL Sentral ilaa Jalan Tuanku Abdul Rahman oo maraya aagga Chow Kit. Marka la joogo Medan Mara waxay la kulmaysaa Khadka Buluugga, oo halkaas ka sii socda kuna biiraya khadadka mar walba jira ee Bukit Bintang. Basaska ayaa aad u camiran inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysa, laakiin waa kuwo waxtar leh oo si cad loo muujiyey. Waxaa jira ogeysiisyo ku qoran Malay iyo Ingiriis.
RapidKL waxay ka shaqeysaa shabakad bas oo raqiis ah oo dhameystiran gudaha iyo hareeraha Kuala Lumpur, laakiin mawjadaha hooseeya (2-3 saacaddii inta badan marinnada) iyo kan wadar ahaan calaamado la'aan ayaa tan ka dhigaysa ikhtiyaar liita booqashada caadiga ah. Basasku waxay leeyihiin macluumaad cad oo ku saabsan halka loo socdo; markaa haddii aad ku dhacdo hal cinwaan oo jihada saxda ah, ku bood boodhka - in kasta oo aad u diyaar garowdo sugitaanka cidhiidhiga ee taraafikada saacadda degdegga ah. Kuwa (yar) soojiidashada ah ee sida ugu wanaagsan loogu soo booqday baska, macluumaadka baska ee gaarka ah ayaa laga bixiyaa goob kasta oo xiisa u leh boggan.
Basaska RapidKL waxaa si ballaaran loogu qaybiyaa saddex qaybood (tixraac bogga RapidKL wixii macluumaad dheeraad ah):
Bandar (B) jidadku waa xirmooyinka Xarunta Magaalada,
Ugu weyn Basaska (U) basasku waxay u safraan hareeraha magaalada
Tempatan (T) basaska waa adeegyada quudinta ee xarumaha tareenka.
Dhammaan saddexda waddo ee RapidKL, waxaad ka iibsan kartaa tikidhada aagga ku saleysan (RM1 ee aagga 1, illaa RM3 ee aagga 4) ee saaran, ama waxaad isticmaali kartaa kaarka Taabashada 'n Go' (oo lagu iibiyo dusha sare - ma cadda haddii tani weli ay khuseyso ee 2017). Markaad isticmaaleysid Taabashada 'Go, ku dhufo hal mar akhristaha agtiisa darawalka - waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad haysato kaarka illaa 2-3 ilbiriqsi illaa uu ka dhawaajinayo) oo garaac aqristaha agtiisa albaabbada dhexe markaad ka baxeyso ama waxaa lagaa qaadayaa lacag qiimaha ugu sarreeya Adeegyada BET (Bas Expressway Transit) waxay adeegsadaan jidadka waaweyn waxayna ku kacaan guri RM3.80 ah. Basasku waxay socdaan laga bilaabo 6 AM-11PM ama wax ku dhow, oo aan lahayn adeegyo habeennimo.
The Khadadka Sunway BRT waa khadadka basaska xawliga ku socda (oo qayb ka ah shabakadda RapidKL) oo u adeegta magaalada Bandar Sunway, waxayna waxtar u leedahay booqashada meelaha soojiidashada ah sida Sunway Lagoon iyo Sunway Pyramid. Waxay ku beddelaysaa LRT Kelana Jaya at USJ7 iyo shabakada KTM Komuter ee Setia Jaya. Joogtayntu waxay la mid tahay ta shabakadaha socdaalka degdegga ah.
Taksi buluug ah (fuliya)
Taksi caadi ah oo casaan iyo cadaan ah (RM3 ugu horeyn 2 km, kadib kudhowaad RM0.90 / km) iyo taksi fulin buluug dhalaalaya (Calanka RM6 + waxyar ka sareeya halkii kiilomitir) waa ikhtiyaarro wanaagsan haddii aad ku heli karto inay mitirka isticmaalaan. Waxaa sidoo kale jira lacago yar yar oo dheeraad ah oo loogu talagalay wicitaanka raadiyaha (RM2), boorsooyinka (RM1 gabalkiiba), iwm.
Wadayaasha baabuurtu uma badna inay isticmaalaan mitirka marka dalabku ka bato saadka, sida waqtiga rugaha lagu jiro ama marka roob da'o. Siciradu markaa waxay noqdaan kuwo lagu gorgortamo (kahor intaanay duulin) oo sicir barar ah (2-10 jeer qiimaha mitirka). Tani waa sharci daro laakiin xaqiiq ahaan waxa kaliya ee aad sameyn karto ayaa ah inaad iska tagto oo aad hesho darawal kale (sharci ahaan waxaa looga baahan yahay inay isticmaalaan mitirka). Gaari yar oo laga amaanay wadada ayaa u badan inuu isticmaalo mitirka marka loo eego midka kaxeeya goobaha dalxiiska. Haddii uu ku xayiro darawal aan isticmaali doonin mitirka, si adag ula xaajoona: RM5 waa inay dabooshaa inta badan safarada magaalada ee 15min ama wax la mid ah, xitaa taraafikada. Haddii aad degan tahay hudheel qaali ah, qari qanigaaga oo u sii suuq weyn oo laga dukaameysto oo ah meesha aad u socoto.
Saqda dhexe ka dib, qiimaha mitirka waxaa lagu kordhiyay 50% (tusaale. 01:00, haddii mitirku muujiyo RM12, waxaad bixinaysaa RM12 + 6).
Inta lagu jiro saacadaha degdegga waxaa guud ahaan fiican in la isku daro gaadiidka dadweynaha iyo tagaasida.
Dhowr meelood oo caan ah (gaar ahaan labada garoon diyaaradeed, KL Sentral, Menara KL iyo Sunway Pyramid Megamall) waxay hirgeliyaan nidaamyo kuubboon horay loo sii siiyay, kuwaas oo guud ahaan ka shaqeeya qaalisan isticmaalka mitirka, laakiin ka raqiisan gorgortanka. Tagaasida ka timaada tukaanka 'Pavilion Shopping Mall' taksiilaheeda mitirka waxaa ku baxday RM2 lacag dheeri ah.
Qaar ka mid ah taksiilayaasha ayaa hareeraha hareeraha ka laadlaada iyaga oo bixinaya dalxiisyo la mid ah kuwa ay bixiyaan shirkadaha aasaasiga ah. Qaar ka mid ah darawalladani waa kuwo aqoon badan leh waxaana laga yaabaa inaad ku dhammaato booqasho si gaar ah loogu talagalay, safar qaas ah oo ka yar qiimaha booqashada rasmiga ah. Ogow sicirka socda ka hor intaadan gorgortan wadin!
Haddii aad ka baxdo jidka garaacmay ee aad u baahan tahay inaad u wacdid taksi, halkan waxaa ku yaal lambarro taleefanno ah:
Raaxo Cabs + 60 3 6253-1313
Cadceedda Taksi Unicablink 1300 800 222 (www.sunlighttaxi.com)
Dadweynaha Cab + 60 3 6259-2020
Uptown Ace + 60 3 9283-2333
Adeegyada Tagaasida ee Keeganlam + 60 17 663-2696
Adeegga Tagaasida ee Fulinta + 60 14 267-5934
Grab (Koonfur-bari Aasiya oo u dhiganta Uber) sidoo kale waxay ka shaqeysaa KL. Qabsashadu waxay u oggolaaneysaa rakaabka inay ku bixiyaan khidmadda lacag caddaan ah, markaa uma baahnid inaad iska diiwaangeliso kaarka deynta.
Kuala Lumpur waxay leedahay wadooyin tayo fiican leh, laakiin wadista magaalada dhexdeeda waxay noqon kartaa riyo cabsi leh ciriiri badan oo taraafiko ah, shabakad isku dhafan oo ka mid ah jidadka waaweyn iyo calaamadaha wadada oo inta badan jahwareersan. Haddii aad baabuur wadid, si gaar ah uga feejignow isbeddelada haadka ee lama filaanka ah ee baabuurta iyo darawallada darawalka ah ee taxaddar la'aanta ah ee u janjeera inay ka soo baxaan ama ka baxaan taraafikada.
Ha dhigan wadada dhexdeeda degmooyin mashquul badan sida Bangsar ama Bukit Bintang maxaa yeelay gawaarida kale ayaa laga yaabaa inay kaa hor istaagaan adiga oo ku ag dhigaya haadka 2 ama 3. Isticmaal baarkinka gawaarida daboolan ama dhig waxoogaa ka baxsan wadada la garaacay, ka dibna dib u soco.
Kireysiga gaari waa ikhtiyaar loogu safro Kuala Lumpur iyo qaybaha kale ee Malaysia.
Xarunta qadiimiga ah ee Kuala Lumpur si cadaalad ah ayaa isku dhafan iyo dhismayaasha qadiimiga ah ee dayactirka kala duwan waxay ku fiican yihiin sahaminta lugta. Xitaa xodxodashada aagga gumaysiga iyo qaybta dhalada iyo birta cusub (eeg socdaalka socodka hoose) waa lagu raaxaysan karaa saacadaha ugu kulul ee 11: 00-03: 00. Waddooyinka waaweyn ayaa si fiican u iftiimay, taasoo ka dhigaysa socodka fiidkii mid aan fiicnayn oo farxad leh. Calaamaduhu waa cad yihiin oo si fiican ayaa loo dhigay oo laamiyadu waa ballaadhan yihiin oo aan jahawareersanayn, laakiin waxay ku siibanayaan roobka. Jidadka hadhka leh ee geedaha leh ayaa hadh ka bixiya waddooyinka waaweyn qaarkood. Isgoysyada dadka lugeynaya waa wax caadi ah waxaana guud ahaan xushmeeya darawalada. Jaywalking waa sharci-darro (ganaax isla goobta ah: RM20/30 dalxiisayaasha/dadka maxalliga ah haddii aan nasiib lahayn) laakiin t guud ahaan waa la iska indhatiraa.
Socdaalkan wareegsan ee wareegsan (2-3 saac) wuxuu ka bilaabmaa Chinatown wuxuuna dhex maraa Saddex xagalka Dahabka ee casriga ah, oo ka maqan dhismayaasha taariikhiga ah ee Xarunta hore:
Ka bilow Chinatown (Petaling Street)
Ku jihayso dhinaca qallalan ee dhismaha Maybank. Madaxa sii raac Jalan Pudu, isagoo maraya bidix istaanka basaska Pudu Sentral. 800 m kadib, shid Jalan Bukit Bintang oo ka dhacay Hotel Royale Bintang.
Jalan Bukit Bintang waa wado weyn oo laga dukaameysto: joogso kafee kafeega Socodka Bintang, ama fiiri elektarooniga weyn ee weyn, Plaza Low Yat.
Markuu Bintang kulmo Jalan Suldaan Ismaaciil mootada, bidix u leexo, adigoo raacaya morashinka.
Ka dib 1 km oo ah Suldaan Ismaaciil, u leexo dhanka midig Jalan P. Ramlee. Tani waxay horseed u tahay Dhismayaasha Mataanaha ee Petronas. Yaab!
Madaxa dib hoos u dhig Jalan P. Ramlee
Isku milmaan Jalan Raja Chulan u dhow KL Tower oo dib ugu noqo dhismaha Maybank iyo Chinatown.
Hadaad nasiib u yeelato inaad socodkan sameyso galabnimadii Axada ee caadiga waxaad heli doontaa magaalo deggan oo soo jiidasho leh.
Sida magaalooyin badan oo ku yaal SE Aasiya, KL waxay u soo bandhigeysaa caqabad weyn dadka safarka ah ee naafada ka ah dhaqdhaqaaqa. Wadooyinka dhinaceeda ayaa badanaa burbursan, korantooyinku way sarreeyaan, jeexitaannada dhinacyada ayaa badanaa la la'yahay ama aan ku filnayn. Isticmaalayaasha curyaamiinta waxay si joogto ah u heli doonaan dariiqa safarkooda oo ay carqaladeeyaan dariiqyada sida xun loo qorsheeyay ama cidhiidhiga ah, baabuurta la dhigto, mootooyinka, dayrarka, jaranjarooyinka, geedaha, iyo wixii la mid ah. wadada. Meelo badan oo magaalada ka mid ah, macquul ma aha in la safro kaaliye la'aan. Wadada oo la gooyo ama lagu lugeeyo wadada (haddii ay dhacdo in la gooyo laamiga) waxay noqon kartaa mid aad khatar u ah, maaddaama darawallo badani aysan fileynin, ama u hoggaansameynin, dadka curyaamiinta ah. Mararka qaar waxaad heli doontaa astaamaha marin u helka sida wiishka ama wiishka oo carqaladeeya ama aan la adeegi karin. Waxyaabaha laga reebi karo ayaa ah KLCC iyo aagga Bukit Bintang, halkaas oo suuqyada laga dukaameysto iyo aagagga lugeynaya loo dhisay heerar istareed casri ah. Dhismooyinka dadweynaha, hudheelada iyo suuqyada waaweyn ayaa bixiya saad ku filan oo musqulo ah. Nidaamka tareenka intiisa badan lama geli karo, gaar ahaan monorail (oo lagu rakibay wiishka jaranjarada). Basaska qaarkood waxay ku rakiban yihiin jaranjarooyin, laakiin si dhib la’aan ah ayaa loo qoondeeyay oo kuma socdaan jadwal cayiman. In badan oo ka mid ah dadka deegaanka uma baran doonaan inay ku arkaan musaafiriinta kuraasta curyaamiinta, laakiin guud ahaan way caawin doonaan.
ee Kuala Lumpur
Hoteelka Aloft Kuala Lumpur Sentral
Hoteelka Ancasa Express Pudu Kuala Lumpur
Hoteelka Ancasa & Spa Kuala Lumpur
Hotelka Anggun Kuala Lumpur Unique Boutique
Hotelka Arenaa Mountbatten Hotel Kuala Lumpur
Huteelka Berjaya Times Square Kuala Lumpur
Madaarka Caalamiga ah ee Concorde Inn Kuala Lumpur
Dalxiiska 'Cyberview Resort & Spa'
Guryaha D'Villa Boutique Kuala Lumpur
Qolalka Fulinta ee Duta Vista Kuala Lumpur
Deganaanshaha E&O Kuala Lumpur
Flamingo By Lake Hotel Kuala Lumpur
Dahabka Dahabiga ah ee 'Palm Palm Tree Iconic Resort & Spa'
Hotelka Grand Millennium Kuala Lumpur
Hoteelka Hilton Kuala Lumpur
Hoteelka Hilton Petaling Jaya
Hoteelka Armada Petaling Jaya
Hoteelka Capitol Kuala Lumpur
Hoteelka Chinatown 2 Kuala Lumpur
Hoteelka Chinatown Inn Kuala Lumpur
Hoteelka Equatorial Bangi Putrajaya
Hoteelka Malaya Kuala Lumpur
Hoteelka Magaalada Novotel Kuala Lumpur
Hoteelka Pullman Kuala Lumpur Bangsar (Furitaanka Hore 2013)
Hoteelka Royal Kuala Lumpur
Hoteelka Seri Malaysia Bagan Lalang
Noocyada Ibis Kuala Lumpur Fraser Business Park Hotel (Furitaanka Dhamaadka 2012)
Hoteelka Le Meridien Kuala Lumpur
Hoteelka Melia Kuala Lumpur
Hal World Hotel Petaling Jaya
Qasriga Faras Dahabiga Ah Magaalada Mines Resort
Parkroyal Suites Adeegyada Kuala Lumpur
Guryaha Guryaha Pavilion Kuala Lumpur
Hotelka Phoenix Kuala Lumpur
Hotelka Prince & Hoyga Kuala Lumpur
Hoteelka Pullman Putrajaya Lakeside
Tayada Hotel City Center Kuala Lumpur
Hoteelka Sama-Sama, Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee KL (Hore waxaa loo yiqiin Pan Pacific KLIA)
Hoteelka Seri Pacific ee Kuala Lumpur
Saxiixa Hotel Kuala Lumpur
Hotelka Silka Maytower & Guryaha La Adeegsaday ee Kuala Lumpur
Dhoola Cadeynaya Hotelka Kuala Lumpur
Degmooyinka Sri Tiara Kuala Lumpur
Huteelka Sunway Pyramid ee Sunway Resort
Swiss Inn Kuala Lumpur - Hoteel Caalami ah oo HIP ah
Hotelka Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur
Degmooyinka Swiss-Garden Kuala Lumpur
Hoteelka Federaalka Kuala Lumpur
Guryaha Adeegga Maple Suite Kuala Lumpur
Hotelka Royale Bintang Kuala Lumpur
Villas-ka Sunway Resort Hotel
Hoteelka Westin Kuala Lumpur
Ganacsatada Hotel Kuala Lumpur By Shangri-la
Huteelada Tune - Downtown KL
Huteellada Tune KLIA-LCCT Airport
Huteellada Tune Kota Damansara
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Malaysia > Hagaha Socdaalka Kuala Lumpur Xalaal